Muuse Biixi oo dagaalkii uu bilaabay ku eedeeyey Farmaajo! – Video • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Muuse Biixi oo dagaalkii uu bilaabay ku eedeeyey Farmaajo! – Video
Muuse Biixi oo dagaalkii uu bilaabay ku eedeeyey Farmaajo! – Video
February 2, 2019 - By: Maxamed Cismaan
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo maanta khudbad kasoo jeediyey xaflad ka dhacay Hargeysa ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu duulaan ku yahay gobalada Somaliland.
Biixi ayaa khudbadiisa ku sheegay in Dowlada Federaalka Soomaaliya ay cunaqabateyn saartay maamulka Somaliland, isla markaana ka danbeysay dagaaladii ka dhacay Tukaraq ee gobalka Sool.
Dagaalka Tukaraq ee bilowday bishii Janaayo 2018 ayaa ahaa mid ay soo qaadeen ciidamada Somaliland ee ka amar qaatay Muuse Biixi, weerarkaasi oo ay ku beegeen booqashadii ugu horeysay Madaxweyne Farmaajo ku tagay magaalada Garowe ee caasimada Puntland, waxaa la yaab noqotay in Biixi uu dagaalkaasi oo uu amarkiisa lahaa ku eedeeyo Madaxweynaha Federaalka oo aysan ka amar qaadan labada ciidan ee ku dagaalamay Tukaraq.
Muuse Biixi ayaa ku dooday in Farmaajo uu hirgelinayo xaduud beeleed, isagoo sheegay inuu ka taliyo Banadir oo kaliya. Inkastoo Biixi ku eedeeyey Farmaajo dagaalkii Tukaraq, ayuu hadana isla khudbadiisa ku sheegay in Dowlada Farmaajo iyo Khayre ay ka taliyaan Muqdisho oo kaliya oo ay gabaad u yihiin ciidamo Shisheeye, waa siduu hadalka u dhigayee.
Hadalada hogaamiyaha Somaliland oo ahaa kuwo iska horimaanayey ayaa sidoo kale ku eedeeyey Dowlada Federaalka inay dagaal ku wado maamulada kale ee Soomaaliya ka jira sida Koonfur Galbeed iyo Jubaland, wuxuuna sheegay in Puntland ay si “dirqileh” uga badbaaday Xukuumada Federaalka!
Madaxweynaha Somaliland iyo xukuumadiisa ayuu xiligan cadaadis weyn oo siyaasadeed ka heystaa gudaha deegaanka uu ka taliyo oo ay weli ka jirto ismarin waa dhinaca xisbiyada ah oo la xariira doorashooyinka soo socda ee Baarlamaanka iyo waliba cadaadis shacabka Somaliland ka tirsanayaan xukuumadiisa oo dad badan u xir xirtay arrimo la xariira fikirkooda siyaasadeed.